Mkpọchi: HC rịọrọ Maha ka ọ zaa ya na akwa nhicha ahụ
Mumbai, Mee 29 (PTI) Courtlọ ikpe dị elu na Bombay na Fraịde gwara gọọmentị Maharashtra ka ọ zaa arịrịọ arịrịọ na-achọ nduzi iji kwupụta akwa nhicha dị ka ihe dị mkpa na iji nye ha ụmụ nwanyị dara ogbenye na ndị nọ na mkpa n'etiti ọrịa COVID-19. Arịrịọ ahụ, ụmụ akwụkwọ iwu gbara akwụkwọ ...
Oge a pụrụ ịtụfu ego ga-echekwa njem ma ọ bụ njem azụmahịa
Enwetara m oge m ọnwa ole na ole tupu mụ eruo afọ iri, yabụ ị ga - eche na m ga - enweta ọbara ọgbụgba a na - apụnara ihe ọ bụla kwa ọnwa ugbu a. Mana, ọ bụ ihe mgbu na ** oge ọ bụla. Abụghị m nnukwu onye ofufe nke tampons, ọkachasị n'ihi na enwere m TSS nchegbu na-enweghị isi ..
Akwụkwọ diski Disise Disposable Unisex maka ndị agadi
site na nhazi na 20-05-21
Usoro / Nzọụkwụ 1: Nke mbu, diaper okenye dị mfe iji. Akwụkwọ ịkwa akwa ndị okenye na-ahụkarị dị iche na diaper nwa. Thedị mma maka diaper okenye dị ezigbo mkpa. Iji mezuo nke a, a na-eji nlezianya hazie udi na akwa nke ndị okenye. Enwere ike ịmịchapu mmachi nke ukwu ...
Oge mkpofu umu nwanyi nke puru iche maka ndi oru dibia
na 2020 azụmaahịa niile ejirila nwayọ nwayọ site na ọmịiko Covid-19, China achịkwala, ndụ udo anyị kwesịrị ịnabata onye ọrụ ahụike anyị nwere obi ike, uwe ogologo ọkpa nwere ike inyere ha aka iyi uwe mkpuchi, oge nsọ anyị nwere ike ịmịcha mmiri 650ml opekata mpe, debe abalị ma ọ bụ elekere asatọ…
Kedu ihe bụ mkpochapụ mkpụfu nwa?
Gịnị bụ paụnd mmamịrị a na-ebufu N’ezie, ebe ọ bụ na amụrụ nwa ahụ, enwere ike iji ya mee ihe n’akụkụ ya ma ọ bụ afọ 2 ma ọ bụ atọ mgbe ọ na-edochaghị akwa ahụ. Mpempe akwụkwọ ndị eji emechi akwụkwọ anaghị eji akwa ma ọ bụ akwa. Ha m ...
Jiangsu Debang Sanitary Co., Ltd tinyere Jiangxi Yoho Technology Co., Ltd na 2018
Jiangsu Debang Sanitary Co., Ltd nke ahụ bụ ụlọ ọrụ anyị jiangsu, isi ngwaahịa a bụ disposable diaper nwa, ngwaahịa ọzụzụ ụmụaka na ngwaahịa ọcha ụmụaka, na 2018 etinye aka jiangxi yoho technology co., Ltd, nke dị na jiujiang obodo, jiangxi provience, nke bụ ọkachamara na ụmụ nwanyị m ...
You chọrọ iyi nkpuchi? Ogige, ogige, ọrụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ iji gbochie ma chịkwaa ihe a na-elekwasị anya? Ndị ikike na-enye ndụmọdụ!
Na May 17, usoro nkwonkwo na-ejikwa ma na-achịkwa nke kansụl steeti nwere nnọkọ akụkọ iji webata mgbochi na njikwa nke covid-19 na nkwalite ahụike ọrụ. Maka mkpa ọ dị iyi akwa mkpuchi, gịnị kwesịrị ị attentiona ntị na oge mgbochi na njikwa ...
Nkpuchi maka eletrik, akụ ma ọ bụ gimmick?
A ga-echeta afọ 2020 dị ka afọ nke ntiwapụ nke ụwa dabara na ụwa ọchịchịrị. Ọ dabara nke ọma, mba anyị emeela ngwa ngwa ma merie akwụkwọ akụkọ coronavirus ahụ na ụgwọ niile. Ugbu a, anyị enweelarị ike tupu ìhè abịa. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ikwu nke ahụ n'ọnwa ise a…
Kafurou Yoho's Brand Face Mask Machine maka Coronavirus Covid-19 na 2020
Ibepu 3 Flat masks maka ndị na-abụghị ọrụ ahụike, na ịlụ ọgụ na Coronavirus. Otu ihu ihu na-arụ ọrụ Mgbe onye nwere COVID-19 riri ma ọ bụ uzere, ma ọ bụ kwuo okwu, ha na-eziga obere mkpụrụ mmiri na coronavirus n'ikuku. Nke ahụ bụ ebe nkpuchi nwere ike inye aka. Ihu ihu na-ekpuchi ọnụ gị na ...
Ihe eji akwa ma ọ bụ akwa akwa, akwa na iko nwanyị, olee nke masịrị gị?
Ngwa ohuru nke igba okachasi gha emeghari umu nwanyi, otutu umunwanyi ndi zutara oge ha na enweta ha n'ihi na ha nwere ike ijigide ha. Na mgbakwunye, ha nwere ike ichebe gị ego ka oge na-aga n'ihi na ị ga-etinye obere ego na disponable tampons na paads. Mana ị maara na ị nwere ike ịzụta dis ...
Davieer Disposable Menstrual Period uwe ime si China rụpụtara
Wearkpupu Mkpọrọ n’oge Iyi n’agha ga-alaghachite na mmiri ịsị n’abalị n’enweghị mmiri ọ bụla, dịka ihi ụra n’elu igwe ojii dị nro. Davieer (Jiangxi Yoho Technology Co., nke LTD nke aka ya) mere ezigbo ogwu nke igba nwoke. A ga-ahọpụta nha atọ nke panties, Ọkwa nha bụ 660 * 530mm, Ogologo…
Enweghi ike nke ọgbọ nke atọ nke afọ ọcha
site na nhazi na 19-06-03
Enweghi ike nke ọgbọ nke atọ nke ihe ọcha ọcha Uru: 1; Ihe eji adọwa ahihia osisi + SAP ngwakọ, ihe owuwu zuru oke. 2; na-enye ume ọhụrụ ma na-eku ume na 4,000 vents kwa square, ike na-agwụ ngwa ngwa, ọ nweghị oke nri. 3; p ...